Androany isika dia hiatrika teboka vavaka ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra. Toy ny amin'ny vehivavy rehetra hiara-mitoetra amin'ny vehivavy matahotra an 'Andriamanitra, dia toy izany koa ny nofinofin'ny lehilahy rehetra hitoetra amin'ny vady matahotra an'Andriamanitra. Ny tolona ataon'ny lehilahy sy ny vehivavy dia tsy mitovy amin'ny fanambadiana. Raha misy vehivavy maniry lehilahy iray izay tsy hivadika amin'ny voadim-panambadiany, mameloa ny ankohonany ary aza miala amin'ny fianakaviany mihitsy. Ny lehilahy koa dia maniry vehivavy izay tsy hahafoy azy rehefa latsaka ny sambo, vehivavy miambina ny lelany ary mampiseho an'Andriamanitra ny toetrany.
Ny fanambadiana dia firaisana mampifaly rehefa miaraka amin'ny vady sahaza ianao. Na izany aza, mety ho lasa helo ety an-tany izy io raha olon-kafa no tafiditra ao aminy. Amin'ireo mpiara-miombon'antoka rehetra, ny karazan'olon-droa izay tsy tokony hipetrahan'ny olona dia ilay tsy manana tahotra an'Andriamanitra. Rehefa tsy manana fahatahorana an 'Andriamanitra ny vehivavy dia manjary azo avela. Izany dia manazava ny antony ilana ny lehilahy tsirairay hiara-mitoetra amin'ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Misy zavatra tsy maintsy ataon'ny lehilahy rehefa mitady vady matahotra an'Andriamanitra izy, avelao hanasongadina haingana ny sasany amin'ireo zavatra ireo alohan'ny hirosoantsika amin'ny vavaka.
Zavatra 3 tokony hatao mba hahazoana vady matahotra an'Andriamanitra
Ny dingana voalohany tokony hatao dia ny tonga mpino. Tsy afaka mitady harena ao anaty lalantsara izay tsy fanananao ianao. Ny dingana voalohany mankany amin'ny fananana vady matahotra an'Andriamanitra dia ny fanomezana ny fiainanao ho an'i Kristy Jesosy. Tsy maintsy apetrakao amin'ny fanjakan'i Kristy Jesosy ny fonao manontolo, amin'izay vao fantatrao ilay olona nantsoina hoe Andriamanitra tsara kokoa.
Tsy misy fahalalana an'Andriamanitra ivelan'i Kristy Jesosy. Ny vavahady ahafantaranao ny zava-dalin'Andriamanitra dia amin'ny finoana fa i Kristy no lalana mankany amin'ny ray. Raha vantany vao omenao fiainana ianao ary tena nibebaka ianao, dia nanjary afaka nanomboka ny fikarohanao sy ny vavakao ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra.
Mety hampihomehy izany, saingy izany no izy. Tsy mandeha mitady vady matahotra an'Andriamanitra ao amin'ny klioba na fisotroana ianao. Ny toerana tsara indrindra hahitana vehivavy izay ny fiainany sy ny fiainany mifantoka amin'Andriamanitra dia ao amin'ny Fiangonana. Mahaliana anao ny mahafantatra fa ny olona betsaka indrindra mankany am-piangonana dia ny lahy sy ny vavy.
Rehefa mivavaka ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra ianao, dia tsy hipetraka fotsiny ao an-trano isan'andro, anisan'izany ny alahady, miandry ny fahatongavan'ilay vehivavy mandondona ny varavaranao. Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'i Ohabolana 18: 22 Izay mahita vady dia mahita zavatra tsara Sady mahazo sitraka amin'i Jehovah. Misy toerana fikarohana. Tsy maintsy mivoaka hitady an-dravehivavy ianao. Vantany vao natolotrao an'i Kristy ny fiainanao dia manomboka mitombo ao amin'i Kristy ianao. Ny toerana misy fitakiana mitombo mba hanomezanao sakafo ny teninao amin'ny tenanao. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahazoana ny tenin'Andriamanitra dia ny fanatrehana fiangonana mino ny Baiboly.
Meteza ho lehilahy matahotra an'Andriamanitra
Hanintona ny karazan'olona misy anao ianao. Raha lehilahy matahotra an'Andriamanitra ianao, dia hisarika vehivavy matahotra an'Andriamanitra ho vady. Ny Baiboly dia milaza fa ny fahatahorana ny Tompo no fiandohan'ny fahendrena. Ny iray izay atahoran'Andriamanitra, dia hanana fahendrena hamantarana ny karazana vehivavy matahotra an'Andriamanitra koa ianao.
Ray Tompo ô, misaotra anao aho tamin'ny andro feno fahasambarana toa an'ity. Misaotra anao aho noho ny fahasoavana nomenao ahy hitako androany, misaotra anao aho nanome anao fotoana hafa, fotoana iray hafa hanompoana anao bebe kokoa, fotoana hafa hanitsiana ireo tsy nety nataoko, fotoana iray hafa hitadiavana sy hahafantarana anao bebe kokoa, Tompoko Enga anie ka hisandratra avo ny anaranao, Tompoko, mivavaka aho anio mba hitahianao vady tsara aho. Mandà ny hipetraka ambany aho. Mivavaka aho mba handefasanao ilay lehilahy namboarinao, ilay lehilahy namboarinao ho pretra ao amin'ny fianakaviana, ilay hijoro hiambina ny fianakaviana, mivavaka aho mba handefasanao azy. amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, araka ny voalazan'ny soratra masina, ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Mivavaka aho ho an'ny vehivavy marina manana fahendrena marina ary avy amin'Andriamanitra ny loharano. Mivavaka aho ho an'ny vehivavy izay hahafantatra anao bebe kokoa noho izaho, vehivavy toa an'i Deborah, vehivavy toa an'i Rota. Ilay matahotra anao noho izaho, vehivavy manompo kokoa sy tia ny zavatr'Andriamanitra, mivavaka aho mba handefasanao azy ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, tonga amin'ny fanoherana ny endrik'i Jesebela rehetra aho, ny endrika isan'ny fikasan'ny fahavalo halefa ahy dia mananatra azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy aho. Mivavaka aho mba hanambaran'ny herin'Andriamanitra Tsitoha ny mombamomba ny zavaboary sandoka rehetra izay mety handefasan'ny fahavalo ny fotoako ary hampisehoany fijaliana amin'ny helo ety an-tany aho, mivavaka aho mba hmanana toerana ao am-poko amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, mangataka ho an'ny vehivavy mahavokatra ho ahy sy fanaka homem-boninahitra ho anao. Mangataka aho mba hampifandraisin'andriamanitra amiko amin'ny vehivavy notendrenao ho an'ny fiainako. Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba homenao ahy fahendrena sahaza hitondrana ilay vehivavy notendrenao ho ahy. Mivavaka aho mba hampianarinao ahy ny karazana valiny mety omena, mivavaka aho mba hiambina ny lelako amin'ny hafanam-po rehetra, mivavaka aho mba hamenoanao ny fahendrena ilaina mba hanomezana valiny marina amin'ny anaran'ny Jesosy.
Tompoko, mivavaka aho mba hampitaovanao an'ity vehivavy matahotra an'Andriamanitra ity amin'ny karazana fahendrena mety ilainy ho vady lehibe. Mandresy ny fanahin'ny fahatezerana ao aminy aho, mananatra ny fanahin'ny herisetra ao aminy amin'ny alàlan'ny anarana hoe Je ahosus
Tompoko, mivavaka aho anio mba hitahianao vady tsara aho. Mandà ny hipetraka ambany aho. Mivavaka aho mba handefasanao ny làlana ilay vehivavy namboarinao, ilay vehivavy namboarinao ho pretra ao amin'ny fianakaviana, ilay hijoro hiambina ny fianakaviana, mivavaka aho mba handefasanao azy ho any amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, araka ny voalazan'ny soratra masina, ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Mivavaka aho ho an'ny vehivavy marina manana fahendrena marina ary avy amin'Andriamanitra ny loharano. Mivavaka aho ho an'ny vehivavy izay hahafantatra anao bebe kokoa noho izaho, lehilahy izay matahotra anao mihoatra noho ny tenako, vehivavy iray izay hanompo sy ho tia kokoa ny zavatr'Andriamanitra, mivavaka aho mba handefasanao azy amin'ny anaran'ny Jesus
Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba homenao ahy fahendrena sahaza hitondrana ilay vehivavy notendrenao ho ahy. Mivavaka aho mba hampianarinao ahy ny karazana valiny mety omena, mivavaka aho mba hiambina ny lelako amin'ny hafanam-po rehetra, mivavaka aho mba hamenoanao ny fahendrena ilaina mba hanomezana valiny marina amin'ny anaran'ny Jesosy.
Next lahatsoratraTeboka vavaka mba hanamaivanana ny fanaintainana
Ajanony izy ireo alohan'ny hampijanonany ireo laharam-bavaka
Vavaka amin'ny ady ara-panahy amin'ny fanoherana ny ranomasina
Febroary 19, 2019
Vavam-bavaka manafaka ny asa any Vain